भारत लगत्तै किन चिन जाँदैछन् प्रचण्ड ?::News from Nepal
भारत लगत्तै किन चिन जाँदैछन् प्रचण्ड ?
केहि दिन अघि मात्र भारत भ्रमणमा गएर फर्किएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आज चीन भ्रमणका त्यसतर्फ प्रस्थान गर्दै छन् । चीनमा राखिएको ‘विश्व शान्ति दिवस’ कार्यक्रमलाई प्रमुख अतिथिका रूपमा सम्बोधन गर्न प्रचण्ड जान लागेका हुन् ।
प्रचण्डसँगै पत्नी सीता, छोरी गंगा, प्रमुख स्वकीयसचिव जोखबहादुर महरा र एक चिकित्सिक छिन् । प्रचण्ड ३ असाजमा स्वदेश फर्किने उनका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाले जानकारी दिए । भ्रमणका क्रममा प्रचण्डले कुन–कुन चिनियाँ नेतासँग भेट्ने भन्ने खुलाइएको छैन ।
नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय टोली शुक्रबार चीन प्रस्थान गरेको छ । चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको निमन्त्रणामा श्रेष्ठसहित बलावती शर्मा, सन्तु दराई, जीवन गौतमलगायत नेता चीन गएका हुन् ।
प्रहरीलाई ४ सय घुस दिन खोज्ने मगर समातिए
‘अनुहार होइन मन रङ्ग्याउँ’
फागु पूर्णिमाको अवसरमा राष्ट्रपति देखि प्रधानमन्त्रीसम्मले दिएको शुभकामना सन्देशमा के छ ?
भूमाफियालाई सघाएको आरोपमा आठ सरकारी कर्मचारी प्रहरी नियन्त्रणमा
मुखले सुघेर मापसे गरे नगरेको पत्ता लगाउन प्रहरी बाध्य